Home Wararka (Akhriso) Midowga Musharaxiinta oo ka digay Doorasho aan loo dhameyn & Cawaaqib...
(Akhriso) Midowga Musharaxiinta oo ka digay Doorasho aan loo dhameyn & Cawaaqib xumada ka dhalan karta
Midowga Musharaxiin ayaa qoraal ay u direen Beesha Caalamka waxay kaga hadleen is mari waaga doorashada iyo sida xal looga gaari karo.
Musharaxiinta ayaa soo jeediyay in xalka uu noqon karo in Hal magaalo lagu qabto doorashada in Arrinta kuraasta Gobolada Waqooyi loo daayo Cabdi Xaashi, sidoo kale waxay sheegeen inay diyaariyeen Liiska xubnaha ay tahay in laga saaro Guddiga doorashada ee lagu muransan yahay.
Waxey intaas raaciyeen iney hayaan liiska xubnaha ay doonayaan in laga saaro guddiga lagu muransan yahay oo ay dowladdu soo saartay, waxeyna arrimahaan imaanayaan xilli ay dowladda ku dhawaaqday in doorashada la guda gali doono iyadoo ay jiraan tabashooyin badan oo doorashada ku gadaaman.
Ugu dambeynta Midowga Musharixiinta ayaa ku baaqay in si looga hortago in doorashada waqtigeeda ay dib uga dhacdo la qabto kulan ay isugu yimaadan Dowladda Dhexe, madaxda Maamul Goboleedyada iyo saamileyda siyaasadda dalka.
Midowga Musharaxiinta ayaa ku baaqay in laga hortago cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii ay DF ku adkeysato Doorashada aan loo dhameyn ee uu doonaya MW Farmaajo in uu ku boobo Doorashada.